Nandeha hidy ny renivohitr'i Bulgaria tao anatin'ny fiovan'ny COVID-19
Home » Vaovao momba ny fizahan-tany an'ny governemanta sy ny sekolim-panjakana » Nandeha hidy ny renivohitr'i Bulgaria tao anatin'ny fiakaran'ny COVID-19
Nandeha hidy ny renivohitr'i Bulgaria tao anatin'ny fiakaran'ny COVID-19
Ny minisitry ny fahasalamana ao Bulgaria, Kiril Ananiev dia nanambara fa ny fitsangatsanganana rehetra mankany Sofia sy i Sofia dia ho voarara mandra-pahatongan'ny fampandrenesana fanampiny, taorian'ny firongatry ny Covid-19 areti-mifindra virus eto an-drenivohitra. Ny fandraràna ny dia dia manan-kery eo afovoan'ny ahiahy amin'ny mety hiparitaka bebe kokoa mandritra ny paska ortodoksa.
Raha ny filazan'ny minisitra dia ny fandrosoana rehetra mankany Sofia sy hividianana olona roa tapitrisa eo ho eo dia voarara, mahomby avy hatrany, afa-tsy ny fitaterana entana sy ny olona tsy maintsy mandeha handeha hiasa, na amin'ny fitsaboana hopitaly.
Ny Bulgarians dia nanao fanazaran-tena nanalavitra ny fiaraha-monina sy nisaron-tava.
Bulgaria dia nanoratra tranga 40 mahery tamin'ny alarobia sy alakamisy, ary nahatratra 800 ny isan'izy ireo, anisan'izany ny fahafatesan'olona 38. Maherin'ny antsasaky ny aretina voamarina no ao Sofia.
Ny firenena Balkan dia efa nametra ny fivezivezena eo an-tanàna tsy ilaina amin'ny volana martsa, saingy nohamafisina ny fepetra rehefa nanandrana handao an'i Sofia ny alakamisy mialoha ny fialantsasatry ny paska ny fiara 5,000 mahery.
Ny orinasam-bola iraisan'ny Air Arabia-Etihad dia toa tsy hahomby hatramin'ny voalohany?